War Cusub: Kenya oo War aan Laga Fileyn ka soo saartay Xeryaha Dhadhaab oo Soomali Badan ay ku Noolyihiin | Kismaayo24 News Agency
War Cusub: Kenya oo War aan Laga Fileyn ka soo saartay Xeryaha Dhadhaab oo Soomali Badan ay ku Noolyihiin
Wednesday November 16, 2016 - 6:35 under Somali News by Tifaftiraha K24
Xukuumadda Kenya ayaa hakisay dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab muddo lix bilood ah si loo helo dhaqaale iyo fursad wada tashi dheeraad ah lagu yeesho.
Qorshaha qaxootiga ee lixda bilood
Bisha 1aad: Diiwaan galinta qaxootiga.
Bisha2aad: Qaxootiga aan Soomaalida ahayn ayaa laga rarayaa xeryaha Dhadhaab, waxaana la gayanayaa xeryo kale oo Kenya ku yaalla.
Bisha 3aad: Qaxootiga qaarkood waxaa loo wareejinayaa waddan seddexaad.
Bisha 4aad iyo tan 5aad: dib u celinta qaxootiga harsan.